Tsy voafehin’ny fitondrana mihitsy : tafakatra 2.300 Ar indray ny kilaon’ny vary | NewsMada
Tsy voafehin’ny fitondrana mihitsy : tafakatra 2.300 Ar indray ny kilaon’ny vary
Zary kabary ihany na mitory teny any anefitra ny fitondrana manoloana ny fidangan’ny vidim-piainana. Tsy voafehiny toy ny tamin’ny herintaona indray ny fidangan’ny vidim-bary ary tafakatra 2.300 Ar sahady ny kilao.
Tsy misy latsaky ny 2.000 Ar intsony indray ny kilaon’ny vary avy eto an-toerana, nanomboka ny faran’ny herinandro lasa teo. Eny amin’ny tsenan’i Mahazo, tafakatra 2.200 Ar ny kilaon’ny vary gasy mena (mangamila), raha mbola 1.800 Ar ny herinandro lasa. Toraka izany koa eny amin’ny tsenan’i Soamanatombo, 2.100 Ar sy 2.200 Ar ny kilaon’ny vary gasy mena, ny “dista” ary efa 2.300 Ar ny makalioka. Efa 1.800 Ar koa ny kilaon’ny vary hafarana avy any ivelany, lazain’ny fitondrana fa tokony ho mora lavitra noho izany. Saika mitovitovy amin’ireo avokoa manerana ny mpivarotra antsinjarany eto an-dRenivohitra.
Sasatry ny mihaona amin’ny mpandraharaha
Anisan’ny tsy voafehin’ny fitondrana koa ny vidim-bary any Toamasina. Misy efa tafakatra 2.800 Ar ny kilaon’ny vary, sady tsy mametraka ny vidim-bary araka ny lalàna ny ankamaroan’ny mpivarotra. Sasatry ny mihaona amin’ny mpandraharaha sy ny mpanafatra vary any ivelany ny fanjakana, saingy tsy misy vokany tsapan’ny mpanjifa. Midika ireo fa vao mainka hihalalina ny fahantrana, tsy misy ny fandrosoana ary mihemotra ny firenena raha tarafina amin’ny zavatra iainan’ny Malagasy, fa tsy mionona amin’ny antontanisa sy ny tarehimarika ambony latabatra taterina any amin’ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI).